Umgomo wokuthumela - Isikhumba se-Pisa Pelle Italian
Sinendawo yokugcina izimpahla eFlorence, e-Italy. Sizothumela ukuthengwa kwakho kuwe ngaphandle kokulinda isikhathi eside. Eminye imikhiqizo yenziwe ngezandla uma u-oda. Lokhu kuzothatha izinsuku ezingeziwe ezingama-5 zokuthumela ngomkhumbi. Isiginesha iyadingeka lapho uhanjiswa.
UKUSHINTSHA KAMAHHALA KUKONKE